Amanqaku kaDeb Gabor kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Ingxelo yeGabor
UDeb Gabor ngumbhali we Ukuphawula ngoSondo: Yenza abaThengi bakho babekwe kwaye bathengise iSihogo kuyo nayiphi na into. Ungumsunguli weSol Marketing okhokele ukubandakanyeka kwesicwangciso sobuchule kwimibutho evela kumagama asekhaya angamazwe afana noDell, Microsoft, kunye ne-NBC Universal, abaphumeleleyo kwidijithali njengo-Allrecipes, uCheezburger, u-HomeAway kunye no-RetailMeNot, kunye nenqwaba yetekhnoloji yamanqanaba okuqala kunye nedijithali Imithombo yeendaba.
NgoLwesithathu, Meyi 24, 2017 NgoLwesithathu, Meyi 24, 2017 Ingxelo yeGabor
Sonke sifuna ukulandela ngokunyaniseka. Sisoloko sikhangela eso sicwangciso sentengiso somlingo esiya kuthi sidibanise nabaphulaphuli bethu kwaye senze imveliso yethu ibe yinxalenye yobomi babo engenakubuyiselwa. Into esingaziqapheli rhoqo kukuba unxibelelwano ubudlelwane. Ukuba awucacanga ukuba ungubani, akukho mntu uya kuba nomdla kuwe. Kubalulekile ukuba uqonda ukuba ngubani uphawu lwakho, kwaye kufuneka uqale njani ngobuhlobo